Ubungqina bokugonywa ngoku bunyanzelekile kumashishini angaphakathi eSan Francisco
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » Ubungqina bokugonywa ngoku bunyanzelekile kumashishini angaphakathi eSan Francisco
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Culinary • inkcubeko • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
USodolophu waseSan Francisco uzalisile
ISan Francisco izakufuna amashishini kumacandelo anxibelelana kakhulu ngaphakathi ukuze bafumane ubungqina bokugonywa kubaxhasi babo kunye nabasebenzi ukuze bangene ngaphakathi kula maziko.
Imfuno yoku-odolwa kwezempilo kubungqina bokugonywa ngokupheleleyo kwabathengi bezinto zangaphakathi zoluntu, kubandakanya imivalo, iivenkile zokutyela, iiklabhu kunye neejim ziqala ukusebenza nge-20 ka-Agasti.
Umyalelo wezempilo wenziwa ukukhusela ekusasazeni ngokuqhubekayo kwe-COVID-19, ngakumbi phakathi kwe-uncaccinated.
Umyalelo weSan Francisco ukwadala ubungqina obutsha bemfuno yokugonya kwiminyhadala emikhulu kwiindawo zangaphakathi.
Usodolophu waseSan Francisco utyhile iodolo entsha yezempilo eyenzelwe ukukhusela ukusasazeka okuqhubekayo kwe-COVID-19, ngakumbi phakathi kwabangagonywanga, ngelixa kugcinwa amashishini evulekile kwaye kunceda ukuqinisekisa ukuba izikolo zihlala zivulekile.
Ubungqina bokugonywa ngoku kunyanzelekile kumashishini angaphakathi eSan Francisco
Mkhulu I-London Breed ibhengeze namhlanje ukuba San Francisco Kuya kufuna ukuba amashishini kumacandelo athile anonxibelelwano oluphezulu ngaphakathi afumane ubungqina bokugonywa kubaxhasi babo nakubasebenzi ukuze bangene ngaphakathi kula maziko.
Ukongeza, i-odolo yedolophu entsha yenza ubungqina obutsha bokufunwa kokugonywa kwiminyhadala emikhulu kwiindawo zangaphakathi, ezifuna abantu abakwiminyaka eyi-12 okanye nangaphezulu kwimisitho enabantu abayi-1,000 XNUMX okanye nangaphezulu ukubonelela ngogonyo.
“Siyazi ukuba ukuze isixeko sethu sibuye umva kulo bhubhane kwaye siphumelele, kufuneka sisebenzise eyona ndlela yokulwa i-COVID-19 kwaye zizigonyo ezo,” utshilo uBreed.
Ngaphambili, urhulumente kunye nemithetho yendawo ibifuna ubungqina bokugonywa okanye ukuvavanywa ukuya kwimisitho yangaphakathi ye-mega enabantu abangama-5,000 okanye nangaphezulu.
Imfuno emitsha yoku-odola impilo yezobungqina bokugonywa ngokupheleleyo kwabathengi bezinto zangaphakathi zoluntu, kubandakanya imivalo, iivenkile zokutyela, iiklabhu kunye nejim ziqala ukusebenza ngo-Agasti 20.
Ukugcina imisebenzi ngelixa unika ixesha lokuthotyelwa, ubungqina bemfuno yokugonya abasebenzi buqala ukusebenza nge-13 ka-Okthobha kubasebenzi, ngokwesibhengezo.
Iimfuno zokugonywa kweziganeko zangaphakathi, ezizimeleyo kunye noluntu, ezinabantu abayi-1,000 20 okanye ngaphezulu ababekho ziqala ukusebenza ngo-Agasti XNUMX.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 35
Usetyenziso olunxulumeneyo umgaqo-nkqubo wabucala Usetyenziso olunxulumeneyo